२१ श्रावण २०७८, बिहीबार ०५:१९ PM
नेविसङ्घलाई ‘अपूरो ’ र तरुणदललाई ‘बबुरो’ किन बनाइयो ?
२२ असार २०७७, सोमबार १९:२१ मा प्रकाशित
२०७७ असार २२ साेमबार, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रमुख भ्रातृ संस्था(नेविसङ्घ)लाई ‘अपूरो र बबुरो’ किन बनाइएको भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ)को एउटा समूहले यस्तै प्रश्नसहित पार्टी कार्यालयको मूल ढोकामा प्लेकार्ड देखाएको छ ।
नेविसङ्घका निवर्तमान कोषाध्यक्ष शिव रिमाल नेतृत्वको समूहले सङ्घको वर्तमान कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन र महाधिवेशनको सुनिश्चताको माग राखिरहेको छ । गत माघ १६ गते करिब एव वर्षपछि नेतृत्व पाएको नेविसङ्घले ५ महिना ५ दिनसम्म पूर्ण पदाधिकारीसम्म पाएको छैन ।
नैनसिंह महर नेतृत्वको कार्यसमितिले २०७५ माग २८ मा राजीनामा दिए पनि पार्टीका नेताहरुबीच भागबण्डा नमिल्दा नेविसङ्घले नेतृत्व पाउन २०७६ माग १६ को साइत कुर्नुपरेको थियो । नेतृत्व पाएको ५ महिना भइसक्दा पनि नेविसङ्घको कार्यासमिति ६ महामन्त्री र दुई उपाध्यक्षमै सीमित रहँदै आएकाे छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेविसङ्घमा अध्यक्षसहित ३ महामन्त्री, २ उपाध्यक्ष, २ सहमहामन्त्री, एक जना कोषाध्यक्ष र ४० जना सदस्य पार्टी रहने भनिएको छ । देउवाले अहिलेसम्म अध्यक्ष र दुई महामन्त्रीलाई मात्र जिम्मेवारी दिएका छन् । यता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट ३ महामन्त्री, २ उपाध्यक्ष, २ सहमहामन्त्री र ३५ सदस्यको नाम दिन भनिएको थियो ।
पौडेल पक्षले पनि अहिलेसम्म दुई जना महामन्त्री बाहेक नाम दिएको छैन । यस्तै नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट २ महामन्त्री, २ उपाध्यक्ष, २ सहमहामन्त्री र ३० सदस्य वर्तमान कार्यसमितिमा समेटिने सहमति भएको थियो । सिटौला पक्षले पनि दुई महामन्त्री र दुई उपाध्यक्षको नाम भने दिन सकेको छैन ।
उपसभापति विजय कुमार गच्छदारको समूहलाई समेट्ने कुरामा पनि कुनै तदारुकता देखिएकाे छैन । तरुण दलको हरिबिजोग नेविसङ्घको भन्दा कारुणिक रहँदै आएकाे छ । महाधिवेशनको म्यान्डेटसहित नियमित कार्यकालमाथि थपिएको ६ महिनाको म्याद पनि आसारमा नै सकिसकेको छ ।
नेविसङ्घलाई देउवाकाे प्रतिप्रश्न
सभापति देउवाले असार १९ गते सङ्गठन खै भनेर नेसविसङ्घका नेता कार्यकर्तालाई प्रश्न तेस्र्याएका थिए । काँग्रेसका पूर्वसभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ९६औँ जन्म जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवा नेविसङ्घले सङ्गठन विस्तारमा काम गर्न नसकेकाे भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
अहिले कतै पनि नेविसङ्घ नरहेको र कुनै पनि स्कुलमा जित्ने हैसियत नेविसङ्घसँग नभएको देउवा भनाइ थियो । उनले भने, ‘राम्रोसँग गर्नुस्, नेविसङ्घलाई बलियो बनाउनुस् । गाउँठाउँमा सबै स्कुल कलेजमा जित्नुस् । जहाँ पनि हारेको हार्यै छ । नेविसङ्घलाई भने लाज पनि छैन ।’
२०२७ मा नेविसङ्घ अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका देउवाले आफ्नो पालामा देशैभरि नेविसङ्घ रहेको र त्यसले पार्टीलाई बलियो बनाएएको सुनाए । उनले भने, ‘हामीले सबै ठाउँमा जितेका थियौँ । नेविसङ्घ कहाँ छ आज ? गाउँमा छ ? स्कुलमा छ ? अहिले गाउँमा कहीँ पनि नेविसङ्घ देखिँदैन । गाउँ स्कुलमा जबसम्म नेविसङ्घ हुँदैन तबसम्म कहिल्यै पार्टी बलियो हुँदैन । त्यही नेविसङ्घ त हो नि पार्टी भन्ने । कहाँ छ नेविसङ्घ ? कतिपल्ट भन्ने ।’
विद्यार्थीहरु आपसमा मिल्न नसक्नु नै मुख्य समस्या भएको उनको भनाइ थियो । उनले भने ‘अहिलेको कुरा केही होइन, सबैकुरा मिल्छ । नेविसङ्घको पूर्णता हुन्छ । नेपाली काँग्रेसको अधिवेशनको काम भइरहको हुन्छ । त्यस कारणले दुई साइडको कुरा हुँदैगर्छ । हाम्रा केही समस्या छन्, बहिर जाँदैन । विद्यार्थीहरु आपसमा मिल्या भए समस्यै हुन्थेन नि । आफूहरु झगडा गर्यागर्यै छन् ।’
केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर बलायरलाई उनीहरुले प्लेकार्ड देखाउँदै सोही कुरा भने। तर बलायर जङ्गिए । बलायरले भने, ‘यहाँ कुराएर काम छैन । तिमीहरु केका गुटका हाै ? भागबण्डा गरिसकिएको छ । उनीहरुसँग कराऊ ।’ त्यसपछि विद्यार्थी र बलायरबीच भनाभन सुरु भएकाे थियाे ।
‘ हामीले बनाएको नेविसङ्घ तपाईंहरुले सकिसक्नुभयो । ठूला कुरा गरेर मात्र हुन्छ ?,’ भन्दै बलायर थप जङ्गिए । बलायरसँगको चर्काचर्कीसँग उनीहरु नाराबाजीमा उत्रिए । महोल शान्त पार्न पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने लागिपरे ।
बलायर, भण्डारीलगायतका केन्द्रीय सदस्यले नेविसङ्घको कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन केले रोक्यो भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । बलायरले भने, ‘नेविसङ्घलाई अपूरो र तरुणदललाई बबुराे कहिलेसम्म बनाइराख्ने ? यहाँ पार्टी महाधिवेशन गर्ने कुरा छ, पहिले नेविसङ्घ र तरुण दलको त महाधिवेशन गर्नुहोस् ? कोरोनाले महाधिवेशनको कुरा रोकियो भन्नुहोला । पार्टीको गर्छु भन्दै कस्सिनुभएको छ । भ्रातृ संस्थाको गर्न सकिँदैन र ?’ यस्तै प्रश्न अन्य केन्द्रीय सदस्यको पनि रहेको थियो । तर उनीहरुले नेतृत्वबाट त्यसको जवाफ पाएनन् ।